Andro iray ao amin'ny foibe famokarana herinaratra nokleary Chernobyl - Fitsangatsanganana | Vaovao momba ny dia
Chernobyl, andro iray ao amin'ny toby famokarana angovo nokleary (fizarana II) - Ny fitsangatsanganana
Enric Gili | | General, Kiev, Inona no ho hita, Ukraine
Tonga ny andro, ny andro nitsidihanay an'i Chernobyl sy ny faritra fampifanarahana nokleary sy ny fanilihana.
Andro tsy manam-paharoa izay tsy hohadinointsika mihitsy. Fitsangatsanganana izay ahitantsika ny zava-drehetra sisa tavela taorian'ny voina tamin'ny 1986.
Nihaona tamin'ny 8 maraina izahay tao amin'ny kianjan'i Maydan, afovoan'i Kiev, izay niandrasan'ny fiaran'ny masoivoho sy ilay mpitari-dalana anay.
Tsy maintsy nangonin'izy ireo ny mpizahatany rehetra nanomboka ny 3 andro samy hafa tao anatin'ny iray andro noho ny fanodikodinan'ny tafika ny faritra. Hitanay taty aoriana fa nisy fampitandremana baomba diso!
Raha atambatra dia ho mpizahatany 12 eo amin'ny zom-pirenena maro isika.
1 Miditra amin'ny faritra fanilihana nokleary
2 Chernobyl, tantaran'ny loza iray
3 Toeram-pamokarana nokleary
4 Pripyat, ilay tanàna matoatoa
Miditra amin'ny faritra fanilihana nokleary
Dia an-tongotra 2 ora nampisaraka anay izy ireo mandra-pahatongan'ny fanamarinana voalohany miaramila. Eo aloha ny fanaraha-maso ny pasipaoro sy ny fisoratan'ny mpitsidika. Efa teo amin'ny boribory manodidina ny 30 km mankany amin'ny tobin'ny angovo nokleary izahay.
Voalohany dia nitsidika tanàna iray nilaozana tanteraka izahay ary vehivavy 85 taona monja no nonina, talohan'ny loza 4000 no mponina. Tanàna matoatoa io. Ny trano rehetra dia efa "nohanin'ny" ala. Potika ny zava-drehetra. Mazava ho azy fa tsy nisy herinaratra, lasantsy, tsy nisy rano na zavatra hafa. Sarotra ny nahatakatra fa nipetraka tao ity vehivavy ity, tsy noho ny fitokanana fotsiny fa noho ny risika ara-pahasalamana (ampahatsiahiviko fa ao anatin'ny faritra manodidina antsika isika miaraka amin'ny fandotoana nokleary).
Avy eo dia manohy ny lalan-kaleha izahay mandra-pahatongantsika any amin'ny tanàna taloha any Chernobyl. Tamin'ny mponina an'arivony lasa, an-jatony vitsy izao, saika ny rehetra injeniera sy miaramila natokana ho an'ny fandotoana. Tanàna iray nivadika ho fitoerana masina ary tadidiko ireo niharam-boina.
Avy eo dia mankany amin'ny toerana fanaraha-maso manaraka isika, 10 km miala ny reactor 4. Avy amin'io fotoana io dia tsy azo atao ny miaina, ny haavon'ny loto amin'ny faritra sasany dia avo dia avo.
Chernobyl, tantaran'ny loza iray
Vao niampita ity tsipika ity izahay dia nitsidika akanin-jaza iray nilaozana. Tavela ny zava-drehetra satria navelan'ny vahiny tamin'ny fotoana nitrangan'ny loza. Efa nanamarika ny metatra an'ny mpitari-dalana haavo avo indrindra amin'ny taratra. Afaka mandany minitra vitsivitsy amin'ity tranonkala ity izahay noho ny antony ara-piarovana. Izay rehetra hitantsika dia toa zavatra avy amin'ny sarimihetsika mampihoron-koditra, manaitra be, mampatahotra mihitsy aza. Manodidina ny trano dia mahita afisy misy fandotoana nokleary isika.
Volana kilometatra maromaro hafa eo amin'ny lalanay miankavia, mitondra antsika any amin'ny ampinga radar Sovietika / anti-balafomanga DUGA-3, fantatra kokoa amin'ny anarana hoe «Woodpecker». Amin'izao fotoana izao dia rindrina vy harafesina goavambe eo afovoan'ny ala izy io, 146 metatra ny haavon'ny sakany an-jatony. Izy izay dia natao hamantarana ireo balafomanga azo avy any andrefana.
Miverina amin'ny làlambe izahay ary afaka minitra vitsivitsy dia tonga ao amin'ny toby nokleary Chernobyl. Efa avo ny haavon'ny fandotoana.
Mamakivaky ny reactor tsirairay izahay tokony ho 100 metatra mandra-pahatongantsika any reactor 4, ilay nipoaka. Mijanona eto izahay haka sary ary handinika ilay trano mifanila aminy, antsoina hoe sarcophagus, natao handevina maharitra ny reactor 4 ary hampihena tanteraka ny haavon'ny taratra. Azontsika atao ny mahita fa injeniera sy miaramila am-polony maro isan'andro no miasa amin'izany asa izany.
Eo ampitan'ny arabe fotsiny no ahitantsika ny Ala Mena, iray amin'ireo teboka maloto indrindra. Ala izay lasa mena ny hazo noho ny taratra. Izay rehetra mitombo dia mahaloto azy, tsy maintsy hokapaina izy io.
Amin'izao fotoana izao dia tsapako fa eo anoloan'ny toby famokarana nokleary Chernobyl aho, izay ny fipoahana no nahatonga ny iray tamin'ireo loza ratsy indrindra tato ho ato. Andian-dahatsaram-pihetseham-po no mandalo ny vatako: alahelo, fihetsem-po, ... Taitra be aho tamin'izay hitako.
Manaraka izany dia tonga eo amin'ilay famantarana fidirana malaza mankany amin'ny tanàna matoatoa izahay, Pripyat 1970, sy ny tetezana izay mampifandray ny faritry ny toby famokarana angovo nokleary amin'ny mponina.
Pripyat, ilay tanàna matoatoa
Pripyat dia iray amin'ireo tanàna maoderina sy tsara indrindra honenana tao amin'ny Firaisana Sovietika teo aloha, loharanom-pireharehana ho an'ny firenena izy io. Tamin'ny fotoana nitrangan'ny loza dia olona 43000 no velona, ​​tsy misy intsony izao.
Lehilahy miaramila farany no nanamarina ny fanamarihana nataontsika ary nanangana ny sakana tsy hitsidihinay ny tanàna. Ny zavatra voalohany hitantsika dia nivadika ala ilay lalana lehibe ary trano sovietika goavambe sy rava tanteraka.
5 minitra amin'ity lalana ity ary tonga eo amin'ny kianja lehibe izahay. Avy teo izahay dia nitsidika ilay fivarotana lehibe taloha, ny teatra ary nandalo ny sisin'ny hotely. Rust daholo, tafaporitsaka ary miaraka amin'ny fahatsapana fa hirodana io indray andro any.
Metatra vitsivitsy taty aoriana dia tonga teo amin'ny faritry ny kodiarana Ferris sy ireo fiara mitifitra izahay, azo antoka fa ny sary mahazatra indrindra an'ny Pripyat izay hitantsika amin'ny Internet. Avo ambony ny taratra.
Mitsidika an'ity faritry ny tanàna ity izahay. Tonga amiko indray ny fahatsapana ho ao anaty sarimihetsika mahatsiravina, fa ankehitriny mifangaro amin'ny fahatsapana lalao video, hafahafa sy mampalahelo avokoa, manaitra izaitsizy.
Manaraka izany dia mandeha amin'ny teboka manan-danja iray hafa isika, ny gym. Nitsidika ny trano iray manontolo izahay, anisan'izany ny piscine, gym ary ny kianja filalaovana basikety. Potika daholo. Rehefa mandeha isika dia mahita efitrano misy sarontava solika amin'ny tany.
Amin'ny faran'ny làlana dia miverina any an-tanànan'i Chernobyl izahay ary misakafo ao amin'ny cantine, toerana tokana ao amin'ny faritra ahafahanao mihinana sy matory.
Teny an-dàlana ho any Kiev, ny masoivoho sy ny mpitari-dalana dia afaka mampiseho amintsika fanadihadiana momba ny fahitalavitra ao anaty van. Mifanitsy amin'ny fiainan'ny mponina ao Pripyat volana maro talohan'ny loza. Manome antsika porofo amin'ny fomba niainan'izy ireo sy ny nahatonga izany rehetra izany. Azontsika atao ny mampitaha ny zavatra hitantsika amin'ny fahitalavitra amin'ny zavatra hitantsika teo amin'ny Internet.
Nanaitra izaitsizy ary tena samy hafa be ny zavatra niainantsika tamin'ny fitsangantsanganana izay tsy nahafantaranay ny zavatra niainantsika mandra-pahatapitry ny andro. Efa tao amin'ny trano fonenan'i Kiev sy ny andro manaraka izahay dia nandinika izay rehetra hitanay ary nanaitra azy.
Eny, efa nandeha tany amin'ny toby nokleary Chernobyl izahay!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Kiev » Chernobyl, andro iray ao amin'ny toby famokarana angovo nokleary (fizarana II) - Ny fitsangatsanganana
Ny Parthenon any Atena
Dia nankany amin'ny Nosy Paka